कालापानी विवादबारे बोल्यो चीन, नेपाल सरकारले चाहे हतियार सहित सेना पठाउन तयार, अब के हाेला? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कालापानी विवादबारे बोल्यो चीन, नेपाल सरकारले चाहे हतियार सहित सेना पठाउन तयार, अब के हाेला?
केही दिनअघि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि गाभेको विषयमा चीनले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यस्तै केहि दिन अगाडि मात्रै भारतले चीन जोड्ने सडकमागर्ग खनेकाे र उक्त सडक खन्दा नेपाली भूभाग मिचेर खनेकाे देखिन आएकाे छ । बिहीबार साँझ काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी क्षेत्रको विवादलाई नेपाल र भारतले वार्ता गरी टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा वर्षौयता नेपाल र चीनबीच राम्रो सहकार्य हुँदै आएको समेत जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीनले बाहिरी हस्तक्षेपको अवज्ञा गर्दै सीमासम्बन्धी मामिलालगायत सहकार्य थप सुदृढ गर्न चाहेको छ ।
र, नेपालसँग साझा विकास प्रवद्र्धन गर्न पनि चीनले चाहेको छ ।’ चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको सफल राजकीय भ्रमण गर्नुभएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा त्यसक्रममा दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको समेत जनाइएको छ ।
विवाहित पुरुषको प्रेमिकाले उनकी श्रीमतीलाई लेखेको मार्मिक पत्र [पढ्नुहोस]
कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि नगरपालिका सिल गरियो